घाँस काट्न गएकी छोरीलाई प्रहरीले जङ्गलमै पटक पटक जबर्जस्ती गरेको बावुले देखेपछि .... , प्रहरी जवान पक्राउ, - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : बिहिबार, साउन २३, २०७६१६:४९ पब्लिक आवाज /संवाददाता
जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा प्रहरी जवान प्रकाशकुमार यादव पक्राउ परेका छन् । सप्तरी घरभई हाल ओखलढुङ्गाको श्रीचौरमा कार्यरत प्रहरी जवान यादवमाथि १८ वर्षीय किशोरीलाई करणी गरेको आरोप छ ।
पीडित किशोरीले बुधबार जाहेरी दिएपछि उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख पुष्पराज मल्लले जानकारी दिनुभयो । किशोरीको किटानी जाहेरीका आधारमा प्रहरी जवान यादवलाई अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान शुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
फोन गरी बोलाएर गोली हानी मनोजको हत्या
सामूहिक बलात्कारको आरोपमा तीन जना पक्राउ !
काठमाडौंमा नक्कली सवारी चालक अनुमतीपत्र बनाउने सामान सहित ३ जना पक्राउ ! पक्राउ पर्नेहरुको विवरण यस्तो छ